Na-Agba Ịnyịnya | October 2021
Isi > Na-Agba Ịnyịnya
na-agba igwe kwụ otu ebe na-enweghị aka
Na-agba ịnyịnya ígwè na-enweghị aka - azịza dị mfe maka ajụjụ
Nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè na-enweghị aka? Icingrụ ọrụ ịnya ịnyịnya na-enweghị aka na nchekwa, mpaghara okporo ụzọ dị ala ga-enyere aka melite nguzozi gị na njikwa gị, nyere gị aka ịgbakwunye ma ọ bụ wepu oyi akwa na-enweghị isi n'ụgbọala ahụ pụọ, mmanụ na igwe kwụ otu ebe jiri obi ike karịa, hichaa iko gị, banye ọsọ ọsọ , na ọ ga - enyere gị aka ịdị njikere maka ekele mmeri ma ọ bụrụ na ị
Skillsgba ịnyịnya - mkpebi ndị bara uru
Kedụ ka m ga - esi mee ka ịgba ịnyịnya ígwè m ka mma? Wzọ 10 iji meziwanye nkà gị ịnya ụgbọ ala Mee ka ịbịaru ebe ndị dị anya site na iji ihe nrụtụ aka. Breeki Mkpa ọkụ, breeki aba. Gbanwee ọsọ gị tupu ntinye nkuku. Kpuchie brek gị n’etiti ụzọ ọ bụla. Jiri oso gi nweta oghere di mma. Gbaa ịnyịnya gị. Zere imezi ihe. Mee ka igwe kwụ otu ebe gị dabara n’ahụ gị.
mmanya na ịnyịnya
Dụ ihe ọ andụ andụ na ịnya ịnyịnya - ihe ngwọta dị irè
Ọ bụ iwu na-akwadoghị na-a drinkụ na-agba ịnyịnya ígwè? Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịnya ịnyịnya ígwè gị n'okpuru ị ofụbiga mmanya ma ọ bụ ọgwụ ike, ị ga-enwe ikpe mara nke a ma ọ bụrụ na ikwesighi ịgba ịnyịnya ruo n'ókè nke na ị nweghị ike ịnwe ịnyịnya ígwè nke ọma. Ga-emehie ma ị nọ n’okporo ụzọ ma ọ bụ n’okporo ụzọ.
na-agba ịnyịnya ígwè n'ụlọ akwụkwọ
Gba ịnyịnya ígwè ịga ụlọ akwụkwọ - ihe ngwọta dị irè
Kedu afọ ole nwatakịrị ga-enwe ike ịgba ịnyịnya ígwè? Kụziere nwa gị ka ọ gbaa ịnyịnya ígwè, nchịkọta: Afọ kachasị mma ịkụziri nwa gị nọ n’agbata afọ anọ na isii. Ọ ga-ewe nkeji iri anọ na ise. Malite na ime ka ha dozie ya. Elekwasịla anya na pedaling naanị. Họrọ ebe mepere emepe ma dị larịị ịmalite, ọkacha mma ọ bụghị ahịhịa n'ihi na ha nwere ike ime ka o sie ike iwu
na-agbada n'okporo ụzọ na-adịghị ọcha
Na-agbada n'okporo ụzọ na-adịghị ọcha - nkọwa zuru ezu
Kedu ka ị si eme ka okporo ụzọ dị larịị Otu ụzọ dị irè iji mejupụta ruts bụ ịdọrọ ihe dị arọ n'okporo ụzọ n'azụ ụgbọala. Enwere ike ịdọrọ ihe dị mma site na osisi, eriri okporo ụzọ, ma ọ bụ otu mpempe igwe I-beam. Dọrọ kwesịrị ịdị ogologo oge ụgbọ gị sara mbara. Dọọ oghere na nsọtụ ọ bụla nke dọkpụrụ ahụ banyere otu ụkwụ site na njedebe.
ịnyịnya ígwè na-agba brooklyn akwa
Bike ịnyịnya brooklyn akwa - Ibọrọ maka nsogbu
Nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè n'elu Brooklyn Bridge? Brooklyn Bridge Bike Tour (Onwe-eduzi) Explore bike-enyi na enyi New York City on a sinik na akụkọ ihe mere eme na-agba ịnyịnya ígwè! Bike na Brooklyn Bridge ma nwee obi iru ugwu Manhattan si n'ofe Osimiri East.
ịnya igwe iji banye n'ụdị
Gba ịnyịnya ígwè ga-enwe ọdịdị - ịza ajụjụ ndị a jụrụ
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji banye n'ụgbọ igwe? Mgbe m gbasiri ike ruo ogologo oge, achọpụtara m na ọ na-ewe ihe dị ka ụbọchị asaa na ụbọchị iri iji maliteghachi inwe mmetụta nkịtị na igwe kwụ otu ebe. Fewbọchị ole na ole ndị mbụ ga-abụ ọgụ ma otu izu ma ọ bụ karịa, ị ga-adị mma ịmalite ịmalite ịbawanye ibu ọzụzụ, mgbe ahụ ị na-aga nke ọma na mgbake.
Egwuregwu ije, ije ije ije
Onye na-amụ ije ije na-agba ịnyịnya ibu - akwụkwọ zuru ezu
Nwere ike a afọ 2 gafere a itule igwe kwụ otu ebe? Ozugbo ụmụaka nwere ike ịga ije ma nwee ezigbo ikike moto (n'ozuzu ihe dị ka ọnwa 18), ha nwere ike ịmalite na igwe kwụ otu ebe. N'ezie, imirikiti ụmụaka ndị mụtara ịgba ịnyịnya ígwè na-agagharị agagharị dịka nwatakịrị ga-enwe ike ịhapụ ịgba ụkwụ ọzụzụ kpamkpam ozugbo ha gbanwere na igwe kwụ otu ebe.
na-agba ịnyịnya ígwè na uwe mwụda
Na-agba ịnyịnya ígwè na uwe mwụda - chọọ ihe ngwọta
Nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè na sket?
ebe itinye mkpọchi igwe kwụ otu ebe mgbe ị na-agba ịnyịnya
Ebe itinye mkpọchi igwe kwụ otu ebe mgbe ị na - agba ịnyịnya - otu esi edozi
Ebee ka ị na-etinye mkpọchi ịnyịnya ígwè gị mgbe ị na-agba Reddit? Ee, ebe kachasị mma maka mkpọchi bụ n’elu ma ọ bụ n’ebe a na-ama ihe. Y’oburu na obu oke mkpọchi zuru oke ka idi ire, ị chọghi iburu ya n’onwe gi. Ugo kryptonite na-amasị m.
onye na agba igwe
Onye na-agba ịnyịnya ígwè - ngwọta na-adịgide adịgide
Gịnị ka ị na-akpọ onye na-agba ịnyịnya ígwè? Ọ bụrụ na ị gbara ịnyịnya ígwè, a pụkwara ịkpọ ụgbọ gị igwe kwụ otu ebe. Enwere ike ịkpọ gị onye na-agba ịnyịnya ígwè, onye na-agba ígwè, ma ọ bụ onye na-agba ígwè.
nnụnụ na-agba ịnyịnya ígwè
Nnụnụ na-agba ịnyịnya ígwè - ihe ngwọta na
Nnụnụ nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè? Ee, ịnwere ike ịgba ịnyịnya ígwè n’abalị.
okooko na-agba ịnyịnya ígwè
Icheoku na-agba ịnyịnya ígwè - azịza dị mfe maka ajụjụ